အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကို ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
January 26, 2020 Cele Family
သဲလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေတစ်ဆင့် ဦးခင်လှိုင်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေအသိမှတ်ပြုအားပေးခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အနေအထိုင်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ရိုးအေးတာကလည်း သဇင်ထူးမြင့်ကိုပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့အနုပညာအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေ၊ သီချင်းဗွီဒီယိုတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် ဒီထက်အနုပညာအလုပ်တွေပိုမိုလုပ်ရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ ဆုံစည်းခွင့် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားပါသေးတယ်။
တစ်စထက်တစ်စ အနုပညာအလုပ်တွေပိုမိုလုပ်ကိုင်လာတဲ့ သဲကတော့ “(၂၀၂၀)ကလည်း အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဲအတွက် ကံကောင်းတဲ့နှစ်လေးဖြစ်လာပါပြီ… ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်… Hearties လေးတွေအတွက် Surprise ပါ…ဘာလေးလဲ ဆိုတာကတော့” ဆိုပြီး ပဟေဠိဖွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သဲရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးခွင့်ရတော့မှာလားဆိုပြီးတော့ ထင်ကြေးပေးခန့်မှန်းမှုတချို့ မှတ်ချက်ပေးရေးသားခဲ့တာပါ။ကြိုးစားမှုကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ နေရာတစ်ခုရလာတဲ့ သဲကို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာမြင်ရတော့မလားဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးခန့်မှန်းကြည့်ကြပါဦးနော်….
သဲလို့ ပရိသတျတှခေဈြစနိုးချေါကွတဲ့ သဇငျထူးမွငျ့ကတော့ အကယျဒမီရှကွေိုကနတေဈဆငျ့ ဦးခငျလှိုငျရဲ့သမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှအေသိမှတျပွုအားပေးခဲ့သူတဈယောကျပါ။အနအေထိုငျယဉျကြေးသိမျမှပွေီ့း ရိုးအေးတာကလညျး သဇငျထူးမွငျ့ကိုပရိသတျတှေ အခဈြပိုစတေဲ့အခကျြပဲဖွဈပါတယျ။
သူကတော့ ကြောငျးတဈဖကျနဲ့အနုပညာအလုပျတှဖွေဈတဲ့ ကွျောငွာရိုကျကူးရေးတှေ၊ သီခငျြးဗှီဒီယိုတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျနတေဲ့အပွငျ ဒီထကျအနုပညာအလုပျတှပေိုမိုလုပျရနိုငျဖို့ ကွိုးစားနသေူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲ အတှအေ့ကွုံအနနေဲ့ ဆုံစညျးခှငျ့ ဇာတျလမျးတှဲထဲမှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခှငျ့ရရှိထားပါသေးတယျ။
တဈစထကျတဈစ အနုပညာအလုပျတှပေိုမိုလုပျကိုငျလာတဲ့ သဲကတော့ “(၂၀၂၀)ကလညျး အနုပညာနဲ့ပတျသကျပွီး သဲအတှကျ ကံကောငျးတဲ့နှဈလေးဖွဈလာပါပွီ… ကွီးမားတဲ့အခှငျ့အရေးပေးတဲ့အတှကျ အရမျးကြေးဇူးတငျပါတယျ.. အကောငျးဆုံးကွိုးစားပါမယျ… Hearties လေးတှအေတှကျ Surprise ပါ…ဘာလေးလဲ ဆိုတာကတော့” ဆိုပွီး ပဟဠေိဖှကျခဲ့ပါသေးတယျ။
သဲရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရိုကျကူးခှငျ့ရတော့မှာလားဆိုပွီးတော့ ထငျကွေးပေးခနျ့မှနျးမှုတခြို့ မှတျခကျြပေးရေးသားခဲ့တာပါ။ကွိုးစားမှုကွောငျ့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ နရောတဈခုရလာတဲ့ သဲကို ရုပျရှငျပိတျကားထကျမှာမွငျရတော့မလားဆိုတာကတော့ ပရိသတျကွီးခနျ့မှနျးကွညျ့ကွပါဦးနျော….
နယ်မင်းသမီး ဆိုတာတွေက အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုတစ်ခုပါလို့ဆိုလာတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
အနက်ရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတဲ့ Scarlett လေးရဲ့မေမေ မြတ်ရတနာကျော်
ကိုယ်တိုင်က နေမကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ကို အနွေးထည်ချွတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပိုပို
ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် အပြန်အလှန်ကန်တော့ရင်း ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ